eNasha.com - ट्रक पल्टाउनेलाई माहुरीको सजाय
दिमाग खराब भएका लाखौँ माहुरीलाई तपाइँ कसरी तह लगाउनु हुन्छ ? शायद यसबारे निकै समय घोरिन बाध्य हुनुहुन्छ ! तिनलाई कसरी शान्त पार्ने भन्ने बारे निकैबेर सोच्नु पनि हुँदो हो ।
३३० क्रेटमा कोचाकोच गरेर बसेका १ करोड २० लाख माहुरी बोकेको एउटा ट्रक पूर्वी क्यानडाको सेन्ट लियोनार्ड नामक सानो शहर नजिकको ठूलो हाइ वेमा पल्टिँदा सोमबार ती माहुरीहरु बौलाए । उनीहरु शान्तिपूर्वक निर्धारित स्थानतिर जाँदै थिए । तर ठाउँमा पुग्नुअघि नै उनीहरुको शान्त यात्रा अशान्त बन्न पुगेको थियो ।
तब ती माहुरी गाडीभित्रै गुम्सिन बाध्य भए तर भित्रका गाडी चालकलाई तिनले त्यत्तिकै छाड्न उचित ठानेनन् । मरणाशन्न हुन पुगेका गाडी चालक कसोकसो ट्रक बाहिर निस्कन सफल भएर प्रहरीलाई खबर गरे ।
यता प्रहरी पनि दंग परे किनभने उनीहरु मात्तिएका मान्छेलाई तह लगाउन जान्दथे तर बौलाएका माहुरीलाई कसरी तह लगाउने, उनीहरुलाई थाहा थिएन । प्रहरीले पुनः माहुरी विशेषज्ञ बोलाएर बौलाएका माहुरीलाई तह लगाउनु पर्‍यो ।
रोयल क्यानेडियन माउन्टेड पुलिसका स्थानीय प्रवक्ता देरेक स्ट्रङले भने- "१ करोड २० लाख मात्तिएका माहुरीलाई पल्टिएको ट्रकबाट ल्याएर पुनः अर्को ट्रकमा खाँध्नु कम गाह्रो कुरा थिएन ।" तर यस्ता बौलाएका माहुरीलाई तह लगाउने माहुरी किसानहरुले तिनलाई शान्त गराए ।
ती किसानहरुले धुँवा लगाएर बौलाएर यता र उता गरिरहेका माहुरीलाई पहिले शान्त गराए । त्यसपछि तिनलाई अर्कै गाडीमा हालिएको थियो । माहुरी बौलाए पनि स्थानीय गाउँलेलाई यसले खासै क्षति नपुर्‍याएको समाचारमा जनाइएको छ ।
गाडी चालकलाई अस्पताल पुर्‍याइएको रोयर्टस समाचारमा जनाइएको छ ।
उदेकलाग्दो माया फट्याइँ गुगल इन्टरनेट सुन्दरी सेलेब्रिटी विज्ञापन भव्यता बलिउड नग्नता प्रविधि उदारता मूर्ख्याइँ परिस्थिति उपाय यस्तो पनि ! हलिउड श्रीमानश्रीमती कीर्तिमान